နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာရအောင် (အပိုင်း ၂၆) - Myanmar Network
Posted by Language Republic on February 25, 2015 at 11:12 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ဒီနေ့ အပိုင်း (၂၆) မှာတော့ တစ်နေရာနဲ့ တစ်နေရာ သွားလာနေတဲ့အချိန်မှာ သုံးနိုင်တဲ့ အသုံးအနှုန်းများကို ဖတ်ရှုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Bill: We'd better takeabus. It's almost impossible to findataxi during rush hour.
Joyce: Isn't thatabus stop over there?
Bill: Yes.. . Oh, oh! There'sabus now. We'll have to run to catch it.
Joyce: O.k .... Oh, no! We just missed it.
Bill: Never mind. There'll be another one in ten minutes.
Shall we...? = do you think we should. . .? (Will ကို ဒီလိုအဓိပ္ပါယ်နဲ့ ဘယ်တို့မှ မသုံးပါဘူး။)
ဒီနေရာမှာ Shall we.. ကိုသုံးထားတာဟာ တစ်ဖက်သူရဲ့ ထင်မြင်ချက်ကို တောင်းတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ရင်ကောင်းမလားပေါ့။ အထူးသဖြင့် ပြောသူရဲ့ဆန္ဒကို နားထောင်သူဆီက အတည်ပြုချက်ရယူတာပါဘဲ။
Will we takeataxi.. ? လို့သုံးရင်မှားတယ်နော်။
Takeataxi orabus...?
ရွေးစရာ ၂ ခု ကို or နှင့် ပြောတဲ့အခါ ပထမ item (taxi) ပေါ်မှာ rising intonation ထည့်ပြောရ ပြီး နောက်ကလိုက်လာတဲ့ bus အပေါ်မှာ falling intonation ဖြစ်သွားတယ်။
(taxi နဲ့ bus ပေါ်မှာ intonation ထဲ့ပြီး အသံ ကျယ်ကျယ်နဲ့ဖတ်ကြည့်ပါ။)
We’d better... = we ought to . . .; it would be wise to ....
လုပ်ရင်ကောင်းမယ်လို့ ပြောချင်တဲ့အခါ သုံးလို့ရတဲ့ phrases တွေဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအထဲက common အဖြစ်ဆုံးက We'd better ဖြစ်ပါတယ်။ We အနောက်က လိုက်တဲ့ 'd က had ဖြစ်ပါတယ်။ would မဟုတ်ဘူးနော်။
Rush hour — နေ့တစ်နေ့ရဲ့ အရှုပ်ထွေးဆုံးအချိန် (အများအားဖြင့် ရုံးတက်ရုံးဆင်းချိန်) ၊ ယာဉ်ကြော အရှုပ်အထွေးဆုံးအချိန် ဖြစ်ပါတယ်။ အချိ်န်အားဖြင့် မနက် ၇ နာရီခွဲမှ ၁၁ နာရီအချိန် ညနေ ၄ နာရီမှ ၆ နာရီခွဲအချိန် အထိဖြစ်တတ်ပါတယ်။ Rush hour သည် compound noun ဖြစ်ပြီး rush အပေါ် primary stress ထည့်ဖတ်ရပါတယ်။
Isn’t that... ?
ဒီမေးခွန်းဟာ affirmative answer ကို တောင်းတဲ့ negative question ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာစကားမှာလည်း "မဟုတ်လား" နဲ့ဆုံးတဲ့ မေးခွန်းနဲ့ အတူတူပါဘဲ။
Bus stop သည် compound noun ဖြစ်ပြီး bus အပေါ် primary stress ထည့်ဖတ်ရပါတယ်။
ဒီအာမေဋိတ်အသံသည် အံ့သြခြင်း၊ ထိတ်လန့်ခြင်း၊ ရုတ်တရက်သတိပေးခြင်းများ ပြုလုပ်တဲ့အခါ သဘာဝအတိုင်း ထွက်လာတဲ့ အသံဖြစ်ပါတယ်။ ပထမ Oh မှာ အသံမြှင့်ပြီး ဒုတိယ oh မှာ အသံ တိမ်ဝင်သွားပါတယ်။ (အို့…အို)
ဒီအာမေဋိတ်အသံသည် ရုတ်တရက် စိတ်ပျက်လတ်ပျက် ဖြစ်ခြင်း၊ ထိပ်လန့်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါ သဘာဝအတိုင်း ထွက်လာတဲ့ အသံဖြစ်ပါတယ်။ ပထမ Oh မှာ အသံ ပြတ်ပြီး no မှာintonation မြင့်သွားပါတယ်။ (အို့… နိုး)
We just missed it = we arrivedamoment too late to catch the bus.
Just ဆိုတဲ့ အထူးပြုစကားလုံးက တစ်ခုခုကို အခုလေးတင် ပြီးသွားခဲ့တယ် ဆိုတာကို ပြောချင်တဲ့အခါ သုံးပါတယ်။ ဘတ်စ်ကားက ကပ်လွတ်သွားတယ်လို့ ပြောတာပါ။
Never mind = it doesn't matter; don't concern yourself.
ကိစ္စမရှိပါဘူးလို့ပြောတာ၊ ဒီစကားက အင်္ဂလိပ် စကားပြော မှာ common ဖြစ်ပြီး အရေးအသား အနေနဲ့တို့ သုံးလေ့ မရှိပါဘူး။